Mugen Train Nahazo $ 352 tapitrisa Dolara, mpanoratra nahazo $ 19,201 - Hafa
Sarimihetsika Mugen Train nahazo $ 352 tapitrisa Dolara, 19,201 ny karaman'ny mpanoratra
Demon Slayer: lamasinina Mugen dia sarimihetsika anime miaraka amin'ny fahombiazan'ny hadalana. Indrindra ao anatin'ny fotoana fohy.
Tao anatin'ny 3 andro nisokafana tany amin'ny sinema dia nahazoana $ 40 tapitrisa dolara mahery.
Raha atambatra, vita ny sarimihetsika Mugen $ 352 tapitrisa dolara. Manao azy ho sarimihetsika anime fivarotana voalohany faha-3 amin'ny fotoana rehetra.
Saingy eo ambanin'ilay faritra dia tsy dia tsara loatra ny sary rehefa jerena.
Koyoharu Gotouge, ilay mpanoratra vehivavy sady mpanoratra an'ny Demon Slayer dia nahazo $ 19K tamin'ny fifanarahana.
Vola tokony hankasitrahana, eny, fa raha ny tena izy dia habetsahan'ny tsy fanajana Money ho an'ny fahombiazana izay avy amin'ny Demon Slayer.
Indrindra rehefa miresaka Fahombiazan'ny Mugen Train manokana.
Ka maninona no naloa ny mpanoratra ny Demon Slayer somary kely?
Araka ny hazavain'i Crunchyroll:
“Nanazava izany i Sugimoto satria Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba no sanganasa voalohany nataon'i Gotouge, hita ho mpanoratra vaovao izy ireo, ka ny fandoavana mialoha ny fampiasana ny asa ho an'ny zon'ny teatra dia mety hampidina ambany dia ambany.
Hanampiana izany, hoy i Sugimoto, Fiaran-dalamby Mugen dia nanapa-kevitra ny ho lasa sarimihetsika mandritra ny fandefasana ny voalohany ny Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Andian-tsarimihetsika amin'ny fahitalavitra, ny lazan'ny franchise dia tsy avo tahaka ny ankehitriny.
Ny roa amin'ireo lafiny roa ireo dia midika fa, tamin'ny ankapobeny, nanombatombana i Sugimoto fa ny vola natolotra an'i Shueisha ho an'ny zon'ilay tantara dia manodidina ny 4 tapitrisa yen ($ 38 372) fotsiny, miaraka amin'ny 2 tapitrisa yen (19 201 $) fotsiny mankany Gouge mivantana ho an'ny famotsorana an-tsehatra. . ”
ny tena izy olana miitatra amin'ireo mpanoratra manga any Japon
Ireo mpanoratra Manga sy tompon'ny zon'ny mpamorona ao Japana dia tsy mangataka ampy an-keriny ampy.
Mazava ho azy fa ny fomba nananganana ny rafitra. Fa gaga aho fa maro no tsy mampivondrona sy mitaky royaly amin'ny asany. Na heverina ho mpanoratra 'vaovao' izy ireo na tsia.
Toa tsara ny vola mialoha, fa ny vola lavitra kosa manandrana ary tsara kokoa hatrany ny safidy.
Raha izany dia, Mpanoratra Demon Slayer dia mpanoratra vaovao ka izany dia anisan'ny antony nandoaany kely. Ary tsy nahazo tombony maro.
Ireo orinasa ny fanontaniana dia tsy vonona ny hanao vivery ny ainy satria tsy manana rakitsoratra miresaka ny mpanoratra. Ary rariny izany.
Fa raha ny tena izy dia satria tsy fantatry ny mpanoratra tsara kokoa amin'ny ankapobeny. Na tsy te hiteraka korontana izy ireo.
Rehefa dinihina tokoa, izy ireo dia manao izany noho ny fitiavana, tsy ny vola. Fa ohatrinona no vidin'ilay fanontaniana apetrakao.
Ireo mpanoratra Manga araky ny efa narosoko teo aloha dia tokony hanangana ny sehatr'izy ireo. Manome azy ireo tombony ny internet raha manana manga tsara.
Amin'izay dia afaka:
Mangataka mpanjaka ambonimbony kokoa (na royalties mihitsy).
Mahazo karama bebe kokoa.
Mifampiraharaha fifanarahana tsara kokoa.
Mahazo fifanarahana tsara kokoa.
Ary manana fifehezana bebe kokoa amin'ny fizotrany.
Ny fananana sehatra dia manome tombony anao, hahatonga ny olona rehetra ho tonga ianao. Mametraka anao amin'ny toerana misy fahefana.
Izay ny eritreritro momba ny vola Koyoharu Gotouge dia naloa noho ny vola namboarin'ilay sarimihetsika lamasinina Mugen tamin'ny fitambarany.
Ilay kintan'ny sary vetaveta Lacey London dia nilaza fa mandany ny fotoanany amin'ny fijerena an'i Anime!
Tovovavy aziatika 16 taona manao zipo manga manga no very tsy hita tany Springfield Lakes, Aostralia
inona no antsoina hoe anime izay tokony hojereko
animes toy ny malalako amin'ny franxx